In ka badan 30 ku dhimatay dagaal ka dhacay Muqdisho - BBC Somali
In ka badan 30 ku dhimatay dagaal ka dhacay Muqdisho
2 Luulyo 2010
Image caption Askari ka tirsan ciidamada dowladda
Waxaa xalay yaraaday rasaas iyo duqayn si joogto ah ugu dhacaysay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho kadib dagaal 3 maalmood u dhaxeeyay ciidamada dowladda oo ay la socdaan kuwa AMISOM iyo kooxaha mucaaradka ee Al-Shabaab ay ka mid tahay.
Dagaalka xoogiisa, ayaa dhacayay degmada Cabdicasiis deegaano ka tirsan, balse duqaynta ayaa gaaraysay meelo ka baxsan goobaha lagu dagaalamaya sida deegaanada suuqbacaad iyo isbitaalka Keysaneey oo ay ku dhaceen madaafiic.
In ka badan 30 ayaa ku dhintay labadii maalmood ee la soo dhaafay, iyadoo in ka badan 120-na ay ku dhaawacmeen, sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho.
Cabsi badan ayaa dadku ka qabaan in dagaalku uu sii xoogaysto aroortii, iyadoo ay tahay maalin sabti ah oo dadkuna ku badan yihiin suuqyada.
Wararka ka imaanaya Muqdisho, ayaa sheegaya in dhinacyada dagaalaya ay wadaan gurmad iyo u diyaargarow dagaal.